Amarobhothi agxiviza ashayela uguquko lwemodeli yokukhiqiza embonini yokugxiviza izitembu zensimbi
Isikhathi sokuthumela: 09-17-2021
Eminyakeni yamuva, isimo sezomnotho sishintshile. Ngokuvela kwezinhlobo ezintsha zemishini ezishintshayo, umjikelezo wayo we-R&D uyashesha, intengo inkulu, futhi iqondiswe kakhulu futhi iqinile. Ukusebenza kwawathatha ngokushesha amehlo abantu bezwe. Lokhu kubandakanya i-st...Funda kabanzi »
Ukuhlaziywa kwe-CAE Springback kanye Nezinyathelo Zokulwa Nemboni Yezingxenye Zezitembu Zezimoto
Thina, inkampani ye-LangO Tool & Die ingesinye sabenzi bokugxiviza izitembu eChina ikakhulukazi abafayo bezimoto. Izingxenye zokugxiviza zensimbi ziphinde zibe yinkinga enzima ezingxenyeni zokugxiviza zezimoto, ikakhulukazi izinto zensimbi ezinamandla amakhulu ezinamandla okukhiqiza angaphezu kuka-600Mpa. Okwamanje, kukhona...Funda kabanzi »
Ithuluzi lemishini ye-CNC
Isikhathi sokuthumela: 09-03-2021
Ukuthunyelwa kwethuluzi elisha e-USA! Isitolo samathuluzi sinyathela isitembu sokushona kwezimoto okuthuthukayo ukudlulisa i-tanden yokukhiqiza okungeziwekomanfacturing cbc eauipment machinery automatiin carsFunda kabanzi »
Ukugxivizwa kwezimoto kuyafa
Isikhathi sokuthumela: 08-27-2021
Izitembu zezimoto ezifayo zithunyelwa eMexico. Isethi yesibili kanye nesethi yesithathu nazo seziqalile ukupakishwa futhi zithunyelwe zilinde umthumeli wempahla kusasa. Lawa masethi amabili nawo angamathuluzi amarobhothi. Usayizi wethuluzi ngu-3600 * 920; 3500*780.Funda kabanzi »
Isitembu semoto siyafa
Isikhathi sokuthumela: 08-25-2021
Isitembu semoto siyafa! Ithuluzi lithunyelwa eMexico. Ukuthunyelwa ngamasethi angu-3 wamathuluzi lena isethi yokuqala. Ithuluzi lihanjiswa yi-manipulator, futhi isithombe esinamathiselwe siwumbiko wokulingisa wenqubo yamathuluzi. Siqhathanise izinga lokuphasa lomkhiqizo ngesikhathi sokuhlolwa kwesikhunta sokuqala ...Funda kabanzi »
Izitembu zensimbi ziyafa
Isikhathi sokuthumela: 08-11-2021
Senza izingxenye ezisengozini zamathuluzi ehadiwe yekhasimende ePoland. Sithenga izinto zokwakha, inqubo ye-CNC yokukhiqiza imishini, inqubo yokwelapha ukushisa, inqubo yokugaya, inqubo yokusika ucingo, inqubo yokuqeda i-CNC, futhi sihlola ngokugcwele ingxenye ngayinye ngaphambi kokuthunyelwa. Ngiyabonga...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: 07-29-2021
Sikhiqize amathuluzi ohlaka ahlukene kumakhasimende aseJapan izikhathi eziningi. Sidizayina, sicubungule, sihlanganise futhi silungise amathuluzi ozimele. Siqongelele ingcebo yolwazi, sinenqubo yokukhiqiza ephelele kakhulu, futhi siye saqashelwa kakhulu amakhasimende. . Siyabonga ngokunaka kanye neqiniso...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: 07-07-2021
Silungiselela futhi sithumele izingxenye ezisele zamathuluzi enziwe yi-MAGNA. Sihlole indawo yembobo ngayinye yomsebenzi ngamunye.Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: 07-01-2021
Thumela eMexico. Izinto zomkhiqizo zaleli thuluzi ziyi-aluminium enogqinsi lwe-1.0mm. Umumo womkhiqizo uyinkimbinkimbi, futhi izidingo zokubekezelela usayizi ziningi. Ngenxa yembobo enkulu emaphakathi nendawo yomkhiqizo, ububanzi besixhumanisi esingaphambili somkhiqizo buncane, umkhiqizo uyaphinda...Funda kabanzi »
I-foot brake car tooling
Isikhathi sokuthumela: 06-22-2021
Senze amathuluzi amaningana okubhuleka ezinyaweni zezimoto eJalimane, eMexico naseSpain. Sifingqe ingcebo yolwazi lobuchwepheshe emigqeni yamathuluzi nesakhiwo samathuluzi nokulungisa iphutha laleli thuluzi lomkhiqizo. Kusukela kusethi yokuqala yamasampula, isikhathi singamaviki ayi-12. Ifushanisiwe yaba ngamaviki angu-8-10 manje, futhi ...Funda kabanzi »
Ithuluzi eliqhubekayo lezimoto
Isikhathi sokuthumela: 06-17-2021
Kungokokuqala ngqa ukwenza ithuluzi lekhasimende laseJalimane, futhi liye laqashelwa ikhasimende. Ikhasimende lanelisekile ngekhwalithi yethu nomoya wokusebenzisana. Sisebenzise amaviki angu-2 ukuklama isikhunta, amaviki angu-3 okucubungula, angu-4 ukuze sihlanganise futhi silungise, kanye neviki elingu-1 ukuze siqedele. Ngiyabonga ukwethemba kwakho...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: 06-11-2021
Ithuluzi eliqhubekayo lezimoto, Ucezu lwethuluzi le-GESTAMP lwathunyelwa eSpain, ubukhulu bezinto ezibonakalayo babungu-3.0mm, okokusebenza kwakungu-JSH599R. Ithuluzi lenze iziteshi eziyi-16, usayizi wethuluzi wawungu-3350mm*750mm, i-punch tonnage yayingu-1000T, kanti isisindo sesikhunta sasingu-4.3T. Ithuluzi lokuqala lanamuhla lokuzama, ukuhlolwa kosayizi 8...Funda kabanzi »